Logo mamaly: inona izany ary ahoana no hanaovana azy | Famoronana an-tserasera
Tahaka ny ahafahan'ny pejin-tranonkala afaka mampifanaraka amin'ny endrika isehoany, dia tsy maintsy manao izany koa ireo singa anatiny izay manorina azy ireo. Logos dia ampahany amin'ny sary famantarana ny orinasa ary izay itarihana ny mpanjifa rehefa mividy. Ireo koa tsy maintsy ampifanarahana sy hiova arakaraka ny scenario izy ireo.
Ny mpampiasa dia tsy maintsy afaka mahita ny maha-izy azy sy ny soatoavin'ny marika, na mijery amin'ny solosaina, finday na mahita dokambarotra vita pirinty. Hazavaiko amin'ity lahatsoratra ity inona no atao hoe logo responsive, ny fomba ahafahanao mamorona ny anao ary ireto misy hevitra vitsivitsy momba ny logo malaza izay afaka nampifanaraka tamin'ny endrika samihafa.
1 Inona no atao hoe logo mamaly?
1.1 Toetran'ny logo mandray andraikitra
2 Ahoana no hamoronana logo mamaly?
3 hevitra logo mamaly
3.3 New Mila mahay mandanjalanja
4 Fehiny: maninona no misy logo mamaly?
Inona no atao hoe logo mamaly?
Ny logo mamaly na fantatra amin'ny anarana hoe logo adaptive dia a logo izay afaka mampifanaraka ny haben'ny efijery, noho izany dia miovaova ny habeny, ny endrika ary ny habaka. Tsy manary ny maha-zava-dehibe azy ireo na ny maha-izy azy ny marika.
Ity sary famantarana ity mamela ny marika hifanaraka na aiza na aiza. Mila maka sary an-tsaina ny endrik'izy ireo ny logo arakaraka ny fitaovana finday ampiasain'ny mpanjifany ny orinasa. Toy izany koa, Amin'ny ankapobeny, rehefa natao ny logo dia misy dikan-teny sy habe maromaro miankina amin'ny endrika an-tserasera ifantohany.
Misy tranonkala antsoina hoe Logos mamaly, izay ahitanao ireo logo fanta-daza izay mifanaraka amin'ny toerana misy azy. Ny vohikala mihitsy no milaza aminao mba hanova ny haben'ny varavarankelin'ny navigateur hahitanao hoe ahoana no mety amin'ireo logos ireo.
Toetran'ny logo mandray andraikitra
Araka ny efa nolazaiko teo aloha, Ny tena mampiavaka ny logo mandray andraikitra dia izany mifanaraka amin'ny habeny, endrika ary habaka rehetra azo atao. Mety misy dikan-teny maromaro amin'ity logo ity, miankina amin'ny endrika marindrano na mitsangana ihany koa izany. Izy ireo dia mety ho marika marika fotsiny, ny anaran'ny marika, ny firaisana amin'ireo roa ireo na ny logo manontolo, izany hoe ny anaran'ny marika miaraka amin'ny kisary sy ny tenifototra.
Ny endri-javatra manan-danja hafa dia ny maha-izy azy sy ny fahatsorana. Ny tanjon'ny logo mandray andraikitra dia ny fampihenana ny foto-keviny ho amin'ny fomba fiteny faran'izay kely indrindra nefa tsy ho very ny maha-izy azy. Ny zava-dehibe dia ny ahafahan'ny mpijery mahafantatra ny marika na inona na inona tranonkala misy azy. Na amin'ny alalan'ny kisary fotsiny na miaraka amin'ny logo manontolo.
Ahoana no hamoronana logo mamaly?
Mba hamoronana logo mamaly dia tsy maintsy ho raisina an-tsaina ny tany am-boalohany famantarana ny marika. Hiankina amin'izany ny dikan-teny manaraka. Efa voalazako teo aloha ny dikan-teny mety ho azony. Azonao atao ny manao izany dingana rehetra izany Adobe Illustrator, satria io no fitaovana famoronana logo lehibe indrindra amin'ny tontolon'ny famolavolana. Na dia afaka mangataka fanampiana amin'ny matihanina amin'ny famolavolana sary aza ianao.
Mila mandinika ireto anton-javatra manaraka ireto ianao mba hamoronana logo mamaly:
Fampihenana ny habeny: tsy maintsy manao andrana habe ianao, satria hisy habe kely indrindra izay tsy ahafahanao mampihena bebe kokoa ny logo, satria tsy azo vakiana.
endrika: fango noforonina amin'ny dikan-teny mitsivalana dia tsy mitovy amin'ny sary mitsangana. Tsy maintsy mahafeno ny fepetra anananao ao amin'ny boky torolalana ho an'ny orinasanao ny logo misy valiny.
Stage: Ny logo dia tsy aseho amin'ny fomba mitovy amin'ny efijerin'ny ordinatera toy ny amin'ny efijery finday, amin'ny farany, satria kely kokoa ny efijery, dia tsy maintsy ampifanarahinao amin'ny fitenenana kely indrindra azo vakiana. Ao amin'ny solosaina, mety hanana ny singa rehetra mandrafitra azy ny logo mamaly anao.
fotsy hoditra: Amporisihina ny hampiharana ny habaka fotsy mitovy amin'ny dikan-teny rehetra amin'ny logo mamaly, mba tsy hiseho tampoka ny fiovana. Rehefa avy namorona ny logo ianao dia afaka maka, ohatra, ny refy fotsy misy eo anelanelan'ny kisary sy ny anarana.
dikan: azonao atao ny manova ny singa rehetra mandrafitra marika: ny anarana, ny kisary, ny tenifototra.
Color: Raha misy loko maromaro ny marikao, dia mety hahaliana fa, arakaraka ny dikan-teny, dia mampihatra loko iray na hafa ianao. Fa raha mbola io loko io dia manampy hamantatra ny marika, raha tsy izany, ampiharo ny loko mitovy amin'ny dikan-teny rehetra. Ianao koa dia tsy maintsy mandinika ny fomba alina, ary manampy azy tsy hisy fiantraikany amin'ny fomba fijery. Manoro hevitra fa ity tranga ity dia miseho amin'ny endrika ratsy na amin'ny loko tokana.
hevitra logo mamaly
Ny orinasa frantsay izay manamboatra akanjo, famantaranandro, menaka manitra ary zavatra lafo vidy maro dia afaka nampifanaraka ny fangony amin'ny fanehoana faran'izay kely indrindra. Manomboka amin'ny logo feno amin'ny dikan-teny marindrano, mampifanaraka azy amin'ny dikan-teny mitsangana ihany amin'ny alàlan'ny fihetsehana ny toerana malaza voay. Farany, esory ny anaran'ilay marika ary avelao ny voay, satria fantatr'izy ireo fa ny hany fanatrehan'ny kisary voay malaza dia afaka fantatra na aiza na aiza, tsy mila mametraka ny anarana eo akaikiny.
Ny marika malaza amin'ny jeans, safidio ny hanaisotra ny teniny ary ampio ny marika marika amin'ny dikan-teny ahena voalohany. Raha ao amin'ny faharoa izy dia misafidy ny hanala ny singa rehetra azo atao, ary ny anaran'ny marika eo akaikin'ny marika mena izay miaraka aminy foana.
New Mila mahay mandanjalanja
Raha ny momba ny dikan-tenin'ny New Balance responsive logo, dia hitantsika amin'ny dikan-teny voalohany hoe ahoana ny tsipika malaza manapaka ny "N" dia mihena ny isa fa mitombo ny habeny, midika izany fa, raha kely kokoa, dia mitovy ny hevitra avoaka. Ao amin'ny dikan-teny tsotra indrindra amin'ny logo, ny litera malaza "N" sy "B" ihany no hita.
Fehiny: maninona no misy logo mamaly?
Ny hoe afaka mampifanaraka amin'ny toe-javatra samihafa ny logo-nao dia miteraka fahatsapana tsara ho an'ny mpijery. Mandroso ny teknolojia ary miaraka amin'izy ireo ny fanohanana ara-teknolojia samihafa, ny marika dia tsy maintsy mahafantatra ny fomba mampifanaraka azy ireo, ary ny zavatra voalohany hitan'ny mpanjifa amin'ny ho avy dia ny famantarana azy. Raha afaka mampifanaraka tahaka ireo ohatra nomeko anao etsy ambony ny logo-nao dia azo antoka fa hanome sary mavitrika sy matihanina kokoa izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Logo responsive: inona izany ary ahoana no hanaovana azy